Mofomamy amin'ny "Intelligence" mankany amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny Internet | Martech Zone
Ny fampielezan-kevitra "drive to web" maoderina dia mihoatra ny fanosehana fotsiny ny mpanjifa mankany amin'ny pejin-tranonkala mifandraika. Izy io dia mampiasa teknolojia sy rindrambaiko marketing izay mivoatra hatrany, ary mahatakatra ny fomba hamoronana fanentanana mavitrika sy manokana hamokatra valiny amin'ny tranonkala.
Tombony iray ananan'ny masoivoho mandroso toa an'i Hawthorne ny fahaizana mijery tsy amin'ny fotsiny Analytics, fa koa handinihana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny sy ny firotsahana. Ity no lakilen'ny fisarihana sy fitazonana ireo mpitsidika tranonkala izay mandray andraikitra, ny fahaizana mampifanaraka ny atiny amin'ny fitondran-tena sy ny tinady. Mila mampifanaraka ny atiny amin'ny fantsona rehetra misy ny orinasa, na amin'ny fahitalavitra mivantana, OTT, na amin'ny haino aman-jery sosialy - ny fitondran-tena dia tokony hampahafantarina azy. Ny hafatra famoronana dia tsy maintsy mifototra amin'ny fahazarana mihinana izay mampisaraka ireo mpijery kendrena, noho izany ny marketing dia mamely hatrany ny tanjona kendrena amin'ny hafatra mety.
Ireo orinasam-pivoarana mandroso dia afaka mahita ny fifandraisana misy eo amin'ny valiny mahery vaika sy ny fiovam-po sy ny traikefan'ny mpampiasa sy ny fitondran-tenany, ary avy eo manatsara ny atiny amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny metatra drive-to-web.
Ilaina ny mifanaraka amin'ny angon-drakitra voalohany sy fahatelo. Tsy ny fahafantarana izay ataon'ny mpitsidika amin'ny tranonkala ihany no tafiditra amin'izany fa ny hetsika izay nataon'izy ireo talohan'ny nahatongavany tao amin'ilay tranonkala. Ny fanaovana izany dia mampifanaraka ny fampielezan-kevitra sy ny tranonkala miaraka amin'ny fironana midadasika mankamin'ny maha-izy azy, izay iarahan'ny angon-drakitra avy amin'ny sehatra samihafa tsy mitovy mba hampivelatra ny fomba fijery izay kendrena ho an'ilay olona. Ny fampidirana am-pahombiazana loharanom-baovao marobe dia mitaky Big Data Analytics ary ny fahatakarana izay data tena zava-dehibe amin'ny famokarana valiny miorina amin'ny mpanjifa tsara.
Mila paikady voaomana tsara ny fananganana angon-drakitra mahaliana momba ny fihetsiky ny mpitsidika amin'ny tranokala iray. Ny fototry ny teknika an'ity fomba ity dia ny fampiasana ny fanarahana ny pixel hanaraha-maso ny fihetsiky ny mpitsidika rehetra. Miaramila miaraka amin'ny mpanaraka pixel mihoatra ny 1,000, ny mpitantana ny fampielezan-kevitra dia afaka manangana "playbook" isaky ny mpitsidika. Mety hanomboka amin'ny piksela fanarahana UX izy ireo, izay mamela ny tranokala hanatsara ny fanatsarana izay mahatonga ny fitetezana / fividianana / fampiasana ny tranokala ho haingana sy mora kokoa. Ampiasaina koa ny pixel mpamatsy angona antoko fahatelo mba hahitanao ny cookies hafa manara-maso ny mpitsidika - manome takelaka sarobidy an'ny data avy amin'ny antoko fahatelo. Ny fanarahan-dia amin'ny fidirana amin'ny haino aman-jery sosialy dia dingana iray hafa ahazoana angona, amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana fanarahana maso mba hifandraisan'ny hetsika ara-tsosialy sy ny fampielezan-kevitra. Inona no dikan'ireo dingana rehetra ireo? Mba hahafahana mampizara ny fotoana tena izy ary mikendry tsara kokoa ary manatsara ny tranokala ho an'ny mpitsidika manaraka.
Fametrahana Optimization ho fampiharana
Rehefa misintona angona ny mpivarotra dia afaka mamorona atiny mampifanaraka tena mifanaraka amin'ny fitondran-tena sy ny toetra izy ireo. Ny atiny dia mampiavaka azy manokana sy amin'ilay tena fitaovana. Izany no itodihan'ny tsirairay amin'ny indostrian'ny drive-to-web, saingy tafintohina amin'ny fomba fitantanana ireo faritra mihetsika rehetra izy ireo. Soa ihany fa misy fitaovana teknolojia any (sy olona za-draharaha amin'ny familiana) afaka manome ny fahitana handrafitra ny atiny sy ny fandefasana hafatra.
Diniho ireto fomba fanao tsara indrindra ireto amin'ny fanentanana doka amin'ny Internet:
Fantaro ny vokatra. Mila misy fampifanarahana eo amin'ny hafatra ilaina hamaritana ny vokatra sy ny zavatra hataony mba hahatonga ny mpanjifa handeha amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny hetsika.
Manamboara hafatra amin'ny fitaovana. Ny fampielezan-kevitra mandroso amin'ny alàlan'ny fanadihadiana dia hanana angon-drakitra amin'ireo fitaovana fijerena votoaty tianao ary hanitsy ny atiny mifanaraka amin'izany.
Amboary ny fandrindrana haino aman-jery. Ampifanaraho amin'ny fifangaroan'ny haino aman-jery mba hifanaraka amin'ny fihetsiky ny mpanjifa angonina ao amin'ilay mpampiasa Analytics, fahafantarana ny fahasamihafana eo amin'ny indostria (na vokatra skincare na teknolojia io.)
Ny fivoaran'ny tranonkala
Ny fanampiana endrika "faharanitan-tsaina" lehibe kokoa amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny Internet dia manasongadina ireo fiovan'ny tranonkala midadasika kokoa. Niala tamin'ny “tranokala mahira-tsaina” izahay nankamin'ny pejy fitobiana sy vavahady, avy eo tamin'ny “tranonkala 2.0.” Ary izao isika dia mifindra amin'ny endrika hafa, miaraka amin'ny tranokala finday ny toerana voalohany, ary ny fahaizana manolotra fandefasan-kafatra amina olona manokana. Ny tranonkala dia tsy toerana itadiavana baiko intsony, fa loharanom-pahalalana marin-tsaina azo ampiasaina hananganana fizarana, ary manatsara sy manatsara ny fanentanana sy ny media. Ity no fomba vaovao fanaovana drive-to-web, mifanohitra amin'ny fomba firakotra lamba manakaiky maso betsaka araka izay azo atao ary manantena ny handray andraikitra ny sasany amin'izy ireo.
Ny fanarahan-dia ireo mpitsidika tranokala dia mazava loatra, miaraka amin'ny fahaizany mandrefy ny halaviran'ny mpividy amin'ny "mividy izao" alohan'ny tsindrio. Ireo orinasan-doka sy marika izay maniry fahombiazana maharitra amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo amin'ny Internet dia handray ny faharanitan-tsaina. Tsy ny fahatsiarovan-tena intsony no tanjona fa ny mikendry ny fihetsika.
Tags: fampielezan-kevitra dokalehibefiara-to-tranonkalaevolisionavoalohany-antokoHawthornetranokala manan-tsainapejy pejyFikarohanapersonalizationvavahadin-tseraserafandefasana hafatralevitraamin'ny fotoana katrokafizarana amin'ny fotoana tena izylasibatraankolafy fahatelofampiasanafizarana pixel uxfanaraha-maso ny mpitsidikampitsidika2.0 web